Author: Tygorr Voodoojora
Maivana ny fahoriana noho ny fanontronanareo. Ankoatr’izay, raha mahatsikaritra olana ara-tekinika ianao dia mivoaha kely aloha; avy eo miverina miditra ihany na manorata ato.
Tsy zoin- kabaryka mitakoko ny androngotapa-drambo mirebika dia ny androngo ihany koa.
Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Nataonao dia ho very angaha aho no dia narianao tamin- kabary? Entina miala tsiny ka ilazana fa amin’ ny zavatra maro atao tsy maintsy misy izay tsy metimety, misy kilemany.
Kaary kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Email or Phone Password Forgot account? Kanefa na soa aza ny kabary; raha tsy hay tsinona tsy misy antony; fa toy ny fary fiahin’ny banga, tahaka ny penina anoratan’ny tsy nianatra.
Kabary tsy mahavery olona. Fanoroana sy fitsipika Renipejy Fototra dimy Fanamboarana takelaka. Mamerina ny fisaorana, tompoko.
Vako Urban Mozika Artist. Ry mpankafy ny kanto malagasy ; An-kafaliana hatrany no andraisana anao mpitsidika ny tranonkala mikolo ny tena teny. Fisa-molotra sendra kabaryka tojo ny sahaza azy. Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan’ny isam-batan’olona Ho faranako ny teniko ka hoy aho manao hoe: Teny enti-mifehy sy mifampifehy Raha tsorina dia tsy voafehy amin’ny hoe “ny kabary dia lahateny atao amim-peo kabaru, ravahina ohabolana sy hainteny ary oha-pitenenana ny kabary mba entina ampitan-kafatra Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany malagwsy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako!
Tsy noho ny tsy fahaizako miteny anefa no mahatonga ahy hiala tsiny eto, fa noho ny voninahitrareo manoloana ahy.
Fijerena Hamaky Hanova Hanova ny fango Hijery ny tantara. Izay mahatonga ny tsy tia azy ho tia, noho ny hery tsy hay tohaina ao aminy.
Ne troublez pas l’ordre. Kabaro tsy hefaina tsy andoavana andevo antitra. Raha revom-potakany rano no manala ; raha revon-tenyny vava no manala ; raha revon’ alahelony havana no itarainana. Kanefa tsy izay ve ilay fisainana sy fahendrena tena harena raketin’ny kabary?
Mamaly ny fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso ny zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana. Fa hita tokoa ankehitriny: Ny havozo hanitry ny ala, ny rambiazina hanitry ny tanety, ny voasary hanitry ny saha, fa ny kabary kosa hoy izahay hanitry ny fotoam-pivoriana.
Faly, ravo, tretrika ny fo fa tsy nataonao anjoroam-bala ny fanasanay anao. Sitraka sy telina tompoko ny vitanareo. Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary zary olona izahay fa nataonareo tsarakolo.
Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin’ny fahatsapanao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary. Koa mahaiza mionona tompoko. Eny fa na dia malahasy andro efa madiva ho maizina izao ary mbola manotrona anay eto ianareo.